विश्वकप फुटबल ब्राजिलमा सुरू . टिभी, जर्सी र प्रोजेक्टरको बढ्यो बिक्री – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
विश्वकप फुटबल ब्राजिलमा सुरू . टिभी, जर्सी र प्रोजेक्टरको बढ्यो बिक्री
२०७१ जेष्ठ ३०, शुक्रबार ०२:५७ गते
नारायणगढ । विश्वकप फुटबल २०१४ बिहीबार रातिबाट ब्राजिलमा सुरू भएको छ । विश्वभर फुटबलको चर्चा भइरहँदा चितवनमा पनि यसको प्रभाव देखिएको छ । गाउँघर र सहरबजारमा जताततै विश्वकप फुटबलको रौनक छाएको छ । बढीजसो युवाहरु आफूले समर्थन गरेको देश र खेलाडीको जर्सी लगाएर हिँड्ने गरेका पाइन्छ ।
विश्वकपको संघारमा आइपुग्दा प्रोजेक्टर, टिभी, जर्सी, फुटबल, जुत्ता आदिको बिक्री एकाएक बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् । इलेक्ट्रोनिक्स पसलका संचालकहरुका अनुसार पछिल्लो दुई हप्तामा टिभीको बिक्री ह्वात्तै बढेको छ ।
शुभकामना इलेक्ट्रोनिक्स नारायणगढका प्रोपाइटर सूर्यभक्त अधिकारीले एलईडी टिभीको बिक्री बढेको बताए । ठूला साइजका एलईडी टिभीको माग बढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार २४ इन्चदेखि ७० इन्चसम्मका एलईडी टिभी ग्राहकको रोजाइमा परेका छन् । जसको मूल्य ३५ हजारदेखि दसलाख रुपैयाँसम्म पर्छ ।
अन्य समयमा हप्तामा एकदुई पिसमात्र बिक्री हुने गरेकोमा विश्वकप फुटबल सुरू हुन लाग्दा दैनिक एउटा एलईडी टिभीको बिक्री भइरहेको अधिकारीले बताए । ग्राहकको रोजाइमा ठूला स्क्रिनका टिभी पर्ने गरेको उनले बताए । एलईडी टिभीसँगै अन्य टिभीहरु पनि बिक्री बढेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
टिभीसँगै प्रोजेक्टरको बिक्री पनि बढेको छ । सीएसई ट्रेड लिङ्क नारायणगढका प्रोपाइटर विवेक शर्माले महिनामा एक दुईवटा पनि बिक्री हुन गाह्रो हुने प्रोजेक्टर विश्वकप फुटबल आएसँगै दुई हप्ताको बीचमा ६ वटा बिक्री भएको बताए ।
प्रोजेक्टरको अन्य समयमा खास मह¤व नभएकाले मानिसहरु थुप्रै यसको बारेमा सोधपुछ गर्न आएपनि केहीले मात्र किनेर लाने गरेको शर्माको भनाइ छ । उनकाअनुसार ४५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्मका प्रोजक्टर बिक्री हुने गरेका छन् । किन्न भन्दा पनि भाडाका लागि मानिसहरु बढी आउने गरेको शर्माले बताए ।
प्रोजक्टर महँगो हुने भएपछि फुटबलप्रेमीहरुले भाडामा लिएर भएपनि खेल हेर्ने चाजोपाँजो मिलाएका छन् । नेपाली समयअनुसार मध्यरातपछि खेलहरु भएपनि कुनै पनि खेल नछुटाइ हेर्ने फुटबल पारखीहरु बताउँछन् ।
फुटबलसँगै सम्बन्धित अर्को व्यापार हो जर्सी र फुटबलको । जानेक्स स्पोर्टस नारायणगढका प्रोपाइटर मदनप्रसाद सिवाकोटीले दैनिक औसतमा ५० वटासम्म जर्सी बिक्री हुने गरेको छ । यहाँबाट गोरखा, लमजुङ, नवलपरासीलगायतका जिल्लामा जर्सी बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । न्यूनतमा ५५० देखि ९ सय रुपैयाँसम्मको जर्सी बढी बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
अन्य समयमको तुलनामा यस सिजनमा फुटबल र जर्सीको बिक्री बढेको दिलमाया पुस्तक भण्डारका रोशन मास्केले बताए । अन्य समयमा विभिन्न क्लबको जर्सी बिक्री हुने गरेकोमा विश्वकपको समयमा देश र खेलाडीको नाम गरेको जर्सी बढी बिक्री हुने गरेको मास्केले बताए ।
दिलमाया पुस्तक भण्डारमा मुकुन्दपुर खेलकुद समितिका कप्तान रहेका सागरविक्रम शाह ब्राजिलको टिसर्ट किन्दै थिए । उनले भने ‘म ब्राजिलको फ्यान हुँ ।’ साथै उनले गाउँमा साथीभाइ मिलेर उद्घाटनदेखिकै खेलहरु प्रोजेक्टरमा हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।
जर्सीमा ब्राजिल अगाडि
जर्सी बिक्रीका हिसाबले ब्राजिलको सबैभन्दा बढी जर्सी बिक्री हुने गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘प्रायःले ब्राजिलकै जर्सी खोज्छन्’ संगम पुस्तक पसलका विकास शर्माले भने । ब्राजिलपछि क्रमशः अर्जेन्टिना, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मन, इग्ल्याण्डलगायतका देश र खेलाडी अंकित जर्सी बिक्री हुने गरेका छन् ।
दर्शकहरुले न्येमार, मेसी, रोनी, रोनाल्डो, क्लोजलगायतका चर्चित खेलाडीको नाम र नम्बर अंकित जर्सी बढी किनेको व्यापारीहरु बताउँछन् । त्यस्तै सम्बन्धित देशका झण्डा, कि–रिङ, रुमाल, तन्ना आदि पनि बिक्री हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।